(Sawiro) Dhalinyaro Bilaabay Dhaqaale Loo Ururinayo Wadada Isku Xirta Ceeldaahir Iyo Ceerigaabo | puntlandi.com
(Sawiro) Dhalinyaro Bilaabay Dhaqaale Loo Ururinayo Wadada Isku Xirta Ceeldaahir Iyo Ceerigaabo
Dhallinyaro Aqoonyahan ah oo is abaabuley, ayaa gobolka Sanaag ka bilaabay wacyigelin iyo dhaqaale ururin ku saabsan hirgelinta mashruuca wadada Ceeldaahir ceergaabo.
Dhallinyaradan oo ka kooban wiilal iyo gabdhoba ayaa socdaal ku tegey meelaha shaqadu ka socoto ilaa xarunta shaqada ee Ceeldaahir , waxayna hadiyad ahaan ugu geeyeen 15 neef oo adhi ah iyo 30 kartuun oo biyo ah .
Waxa iyaguna dhankooda kulamadaas kala soo qayb galay xubno ka tirsan gudiga wadada ee heer Puntland oo kormeer ku samaynayey habsami u socodka shaqada .
tallaabooyinka u hirgalay gudiga ayaa waxa ugu muhiimsanaa in lagu wareejiyey xarun ku taal magaalada Midigale oo ay dhowaan soo degi doonaan khubarada iyo hawl wadeenada wadada ee iminka degan magaalada Ceeldaahir iyo koox cusub oo iyaguna degi doona Ceeldaahir oo bilaabi doona wejiga labaad ee Jayga iyo Daamurka.
Mas’uuliyiinta gobolka Sanaag ayaa bogaadiyey aqoonyahanka is abaabuley ee wacyi gelinta iyo dhaqaale ururinta bilaabay , waxayna bulshada dalka iyo dibada ugu baaqeen iney u wada guntadaan sidii mashruuca wadadu u hirgeli lahaa .